tuubooyinka steel Shiinaha xuduud lahayn, waayo, kululeeyaha-kar sare ee GB / T5310-2017 Standard-saaraha iyo qeybiye | Gold Sanon
tuubooyinka bir aan xuduud lahayn, waayo, kululeeyaha-kar sare ee GB / T5310-2017 Standard
carbon tayo sare leh steel dhismaha, bir daawaha dhismaha, iyo biibiile ahama kulaylka u adkaysta aan xuduud lahayn steel steel for-kar sare iyo wixii ka sareeya tuubooyinka kuleeliyaha uumi ee GB / T5310-2007 caadiga ah. Waxyaabaha inta badan waa CR-Mo daawaha iyo Mn Daawaha, Sida 20g, 20MnG, 20MoG, 12CrMoG, iwm
Fasalka Group: 20g, 20MnG, 25MnG, iwm
Ballaca dibadda ah (Round): 10 - 1200 mm
Length: dhererka ama dhererka random go'an (6-12m)
daaweynta Heat: Annealing / caadi
Tuuboyinka Gaar ah: tuuboyinka kuleeliyaha
Isticmaalka: kuleeliyaha iyo Heat Iskubedelka
Baaritaanka: ECT / ut / Hydrau guurto ah
Waxaa inta badan loo isticmaalaa si carbon tayo sare leh steel dhismaha, bir daawaha dhismaha iyo tuubooyinka ahama birta aan xuduud lahayn steel kulaylka u adkaysta, waayo, cadaadiska sare iyo wixii ka sareeya tuubooyinka kuleeliyaha uumi.
Inta badan loo isticmaalo cadaadis sare iyo adeegga heerkulka sare ee kuleeliyaha (tube Superheater, tube reheater, tube guide hawada, tube uumi ugu weyn ee kululeeyaha kar sare iyo aalladda). Under tallaabada ee heerkulka sare gaaska qiiqa iyo uumiga biyaha, tuubada oxidize doonaa oo Burburiyaan. Waxaa loo baahan yahay in biibiile steel leeyahay cimri dherer sare, caabbi sare in lagu qayilo iyo daxalka, iyo xaaladda dhismaha wanaagsan.
Fasalka ee carbon tayo sare leh steel dhismaha: 20g, 20mng, 25mng
Fasalka of steel daawaha dhismaha: 15mog, 20mog, 12crmog, 15crmog, 12cr2mog, 12crmovg, 12cr3movsitib, iwm
Fasalka of steel kulaylka u adkaysta miridhku u adkaysta: 1cr18ni9 1cr18ni11nb
J Haddii alaab-ballan qaadi karno in content nitrogen buuxiyey shuruudaha in miiska, falanqaynta content nitrogen waxaa laga yaabaa in aan lagu samayn. Haddii Al, FG, V, Ti iyo xubno kale daawaha la qardarin nitrogen waxaa lagu daraa bir ah, content nitrogen ah kuma koobna. content u qardarin nitrogen waa in la cayimay in shahaadada tayada.
"Marka la isticmaalayo aluminium oo dhan, wadarta Ait content aluminium ^ 0,020% B
Wall dhumucda iyo Ballaca Outter:
Haddii aanu jirin shuruudaha gaarka ah, iyo biibiilaha noqon qeybiso bixinta sida dhexroor outter norminal oo dhumucdiisuna waxay derbiga norminal. Sida sheet dabagal
Habka of saaridda
fasalka caadiga ah
Hot la duubay (extrude) biibiile
Ballaca outter Norminal
± 0.75% D
+ 1% D ama + 5.Take yar hal 一 2
+ 1% D ama + 7, Qaado yar hal 一 2
Norminal Wall dhumucdiisuna
+ 12.5% ​​-10% S S
biibiile ballaarinta kaamerada
Cold barbaro (giringiriyey)
> 25.4 ~4 ()
dhererkiisu caadiga ah ee tuubooyinka steel waa 4 000 mm ~ 12 000 mm. Ka dib wada tashi u dhexeeya qeybiyaha iyo iibsadaha, iyo dheregtay qandaraaska, waxaa loo dhiibi karaa tuubooyinka steel la weyn dherer ka badan 12 000 mm ama ka gaaban waxaan 000 mm laakiin aan gaaban ka badan 3 000 mm, dhererka gaaban Tirada tuubooyinka bir ka yar 4,000 mm laakiin aan ka yarayn 3,000 mm kama badnaan 5% tirada guud ee tuubooyinka steel samatabbixiyey
Marka tuubooyin bir waxaa loo dhiibaa sida uu dhexroorka magacaaban dibadda ah oo dhumucdiisuna waxay derbiga ku magacaaban ama dhexroorka magacaaban hoose oo dhumucdiisuna waxay derbiga magacaaban, tuubooyin bir waxaa loo dhiibaa sida uu miisaanka dhabta ah. Waxa kale oo la bixin karo sida uu miisaankiisu akhriska.
Marka tuubooyin bir waxaa loo dhiibaa sida uu dhumucdiisuna dhexroor iyo ugu yaraan derbigii dibadda ku magacaaban, tuubooyin bir waxaa loo dhiibaa sida uu miisaanka dhabta ah, xisbiyada baahida iyo wax wada xaajood. Oo waxaa lagu tilmaamay in heshiiska. Tuubooyin bir ayaa sidoo kale waxaa loo dhiibi karaa sida uu miisaankiisu akhriska.
Sida ku cad shuruudaha iibsadaha, ka dib markii wada tashi u dhexeeya qeybiyaha iyo iibsadaha, iyo in heshiiska, weecasho u dhexeeya miisaanka dhabta ah iyo miisaan tiyoriga biibiilaha steel gaarsiinta kulmi doona shuruudaha soo socda:
a) Single steel biibiile: ± 10%;
b) Dufcaddii kasta oo tuubooyinka steel la size ugu yaraan 10 t: ± 7.5%.
biibiile steel waa in la hydraulically mid la tijaabiyey by mid ka mid ah. cadaadiska imtixaanka ugu badnaan waa 20 MPA. Cadaadis imtixaanka, waqtiga xasilinta waa in aan ka yarayn 10 s, iyo biibiile steel waa in aan daadato.
Ka dib markii user ogolaado, imtixaanka Haydarooliga lagu beddeli karo baaritaanka hadda Eddy ama imtixaanka baxsiga ka daadanayo magnetic.
Dhuumaha oo u baahan baaris dheeraad ah waa in la ultrasonically kormeero mid mid. Ka dib markii wada xaajood ay u baahan tahay ogolaanshaha ee xisbiga oo waxaa ku cad heshiiska, baaritaanka kale oo aan burbur lagu dari karaa.
Tuubooyinka la weyn dhexroor dibadda ah 22 mm waa in lagu qaado imtixaanka fidsanaan aad loo. No delamination la arki karo, dhibco cad, ama nijaasta waa in ay dhacaan inta lagu jiro tijaabo oo dhan.
Imtixaanka saareen Isbaheysiga:
Sida laga soo xigtay shuruudaha iibsadaha iyo ku xusan heshiiska, tuubooyin bir leh dhexroor ≤76mm dibadda iyo derbiga ≤8mm dhumucdiisuna waxay la samayn karaa faafeysey imtixaanka. Tijaabada waxaa loo sameeyaa heerkulka qolka la gabogabaysmo a of 60 °. Isbaheysiga dib u, heerka faafeysey of dhexroor dibadda waa in ay buuxiyaan shuruudaha miiska soo socda, iyo wax imtixaanka waa in aan tuso dildilaac ama luxay
Outter dhexroor faafeysey heerka biibiilaha steel /%
Ballaca Inner / Outter Ballaca
oo tayo sare leh carbon steel dhismaha
steel daawaha Dhismayaasha
• dhexroor The hoose waxaa loo xisaabaa tijaabada.
Taangiyada kululaynta aan xuduud lahayn Steel Tubooyinka Waayo High-Cadaadis
Previous: Guudmarka biibiile kuleeliyaha
Next: APISPEC5L-2012 Carbon aan xuduud lahayn Steel Line tuuboyinka 46aad edition
Hot la duubay aan xuduud lahayn Steel Tube
tube bir aan xuduud lahayn